ထရီတွန် (လ) - ဝိကိပိဒိယ
(Moons of Neptune မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဤနေရာသို့သွားရန် -	အ​ညွှန်း​, ရှာ​ဖွေ​ရန်​နတ်ပကျွန်း၏ အရံဂြိုဟ် ထရီတွန်
နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ အကြီးဆုံးသော လအမည်မှာ ထရီတွန် (Triton) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နေအဖွဲ့အစည်း၏ ခုနှစ်ခုမြောက် အကြီးဆုံးလတစ်စင်းဖြစ်သည်။ ထရီတွန်သည် အာကာသဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း၊ ရာဇဝင်များဖြင့် ရှုပ်ထွေးနေပြီး ၎င်း၏ သစ်လွင်သော မျက်နှာပြင်နှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခုကို နေအဖွဲ့အစည်း၏သက်တမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရန်တွေးခဲ့ကြသည်။ ဂျာမန်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များဖြစ်ကြသည် ဂျိုဟန် ဂေါ့ဖရန့် ဂယ်လီနှင့် ဟိန်းရစ်ချ် လူးဝစ်တအာရက်တို့ နှစ်ဦးသည် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ၁၇ ရက်အကြာတွင် ၎င်းနက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ ဂြိုလ်ရံ လကြီးကို ဗြိတိန်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် ဝီလျံ လောစီ က ၁၈၄၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ထရီတွန်သည် Kuiper belt ဟုခေါ်သည့် နတ်ပကျွန်းဂြိုဟ်မှ ထွက်လာသည့် လမ်းကြောင်းအတွင်း ဖမ်းယူခြင်းခံရသည့် ဂြိုဟ်တစ်လုံးဖြစ်သည့်အပြင် နေအဖွဲ့အစည်းတွင် အအေးဆုံးသော ဂြိုဟ်တစ်ခုဖြစ်ရမည်ဟု အချို့ကတွေးတောကြသည်။ ထရီတွန်၏ မျက်နှာပြင်အပူချိန်အား ဗိုယဂါ ၂ ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားရာတွင် -၂၃၅ ဒီဂရီ ဆယ်လ်ဆီယမ် အထိ အေးသည်ဟု သိရသည်။
ယခုချိန်တွင်ထရီတွန်သည် အနိမ့်ပိုင်းပတ်လမ်းသို့ ကျရောက်နေသည်ဟုလည်း ဆိုကြသည့်ပြင် နှစ်သန်း ၁ထောင် ခန့်တွင် ထရီတွန်သည် တစ်ခုခုနှင့် ထိခိုက်မိ၍ နက်ပကျွန်းဂြိဟ်၏ လေထုလွှာတွင်းသို့ သက်ဆင်းရမည်သို့မဟုတ် စေတန်ဂြိုဟ်၏ လက်စွပ်စနစ် (Ring System)နှင့် ဆင်တူသည့် စနစ်အတွင်းတွင် ပျက်သုဉ်းလိမ့်မည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက သုံးသပ်ကြလေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ NASA: Solar System Exploration: Planets: Neptune: Moons: Triton. NASA. Retrieved on 2011-03-29။
↑ BBC Home: Science: Space: Solar System: Moons: Triton. BBC. Retrieved on 2011-03-29။
နေ - ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် - သောကြာ(သို့)ဗီးနပ်စ်ဂြိုဟ် - ကမ္ဘာဂြိုဟ် - အင်္ဂါ(သို့)မားစ်ဂြိုဟ် - စီးရပ်စ် (ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှား) - ကြာသပတေး(သို့)ဂျူပီတာဂြိုဟ် - စနေ(သို့)စေတန်ဂြိုဟ် - ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ် - နက်ပကျွန်းဂြိုဟ် - ပလူတို - အဲရစ် (ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှား)
ဂြိုဟ် - ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှားများ - လများ: Terrestrial - မားစ်ဂြိုလ်ရံလများ - Jovian - Saturnian - Uranian - Neptunian - Plutonian - Eridian
Small bodies: Meteoroids - Asteroids/Asteroid moons (Asteroid belt) - Centaurs - TNOs (Kuiper belt/Scattered disc) - ကြယ်တံခွန်များ (Oort cloud)
"http://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထရီတွန်_(လ)&oldid=200735" မှ ရယူရန်	ကဏ္ဍ: အာကာသဂြိုဟ်များသိပ္ပံ	Navigation menu
ဤစာမျက်နှာကို ၈ မတ်​၂၀၁၃ ရက် ၂၃:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။